Hagaajinta howlaha isagaarsiinta iyo tamarta xilliga colaadeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hagaajinta howlaha isagaarsiinta iyo tamarta xilliga colaadeed
La daabacay torsdag 11 maj 2017 kl 10.39
Peter Hultqvist: goobo amni ah oo leh waxyaalaha daruuriga ah
Heyadaha dowladda oo looga fadhiyo hirgelinta goobo amni ah haddii xaalad dagaal ay dalka la soo gudboonaato.
Si loo xoojiyo difaaca guud ayey dowladdu ku guubaabineysaa heyaddaha dowliga ah ee ugu muhiimsan, maamulka gobolada ee caafimaadka iyo degmooyinka in ay ka baaraan-degaan sidii wax weliba u shaqeyn lahaayeen haddii waddanka la soo gudboonaato xaalad cakiran ama dagaal.
Tusaale waxay ahaan kartaa goobo amnigoodu suganyahay oo koranto, cunto iyo qalab isgaarsiineed u dhamaystiranyihiin.
– Goobaha noocaan ah waxaa ka mid ahaan karo goobo loogu talogalay Hogaanka oo amni ah, oo laga baaraandego sidii goobahan loo gaarsiin lahaa waxyaabaha daruuriga ah sida cuntada, korontada iyo dhamaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah, ayuu yiri wasiirka difaaca Peter Hultqvist.
Arrintan waxay xiriir la leedahay soo xumaashaha xaaladda amni siyaasadeed ee Sweden wajahayso, iyadoo dhawaan baarlamaanka dalka uu go’aan ku gaaray xoojinta difaaca guud.
Difaaca dalka iyo hey’adda ka hortagga musiibooyinka iyo diyaargarowga MSB ayey dowladda howl u siisay ka shaqeynta sidii hey’adaha qaabilsan tusaale tamarta, gaadiidka, nidaamka dhaqaalaha iyo amnigu u shaqeyn lahaayeen markii xaalad cakiran waddanka soo wajahdo, oo la hirgeliyo goobo amni ah oo ay ka howlgalaan. Xataa degmooyinka muhiimka ah iyo maamulada gobalada ayaa laga doonayaa in ay lahaadaan karaanka ama awoodda noocaan ah.
Sidoo kale hey’addaha ay quseyso ayaa laga doonayaa in ay ka shaqeeyaan sidii jagooyinka muhiimka ah u buuxin lahaayeen xaruumaha dagaalka shaqsiyaadka loo waco, waa marka uu dalku ku jiro xaalad degdeg ah.
- Waa in ay cad yihiin howlaha laga doonayo shaqaalaha haya howlaha istiraatiijiga ah markay jirto xaalad dagaal. Howlwadeenada waxaa looga fadhiyaa qabashada howlsha loo igmaday, waana in lagu wargeliyo waajibka saaran markay xaalad dagaal taagan tahay, ayuu yiri wasiirka difaaca Peter Hultqvist.